BAT NO 32 जानकी समूह रसुवा केरुङ्ग
देश दर्शनको क्रममा नेपाल चिनको सिमा नाका केरुङ्ग रसुवा ।
Staff Collage BAT Mate Friends
स्टाप कलेज तालिममा साथीहरुसँग
SMC Student Council
SMC Student Council को संयोजन पद हस्तान्तरण पश्चात
Tsomogo Lake Sikkim
TSOMGO Lake ३७५३ मिटर उचाइमा अवस्थित छोंगो ताल सिक्किम
रारा ताल मुगु
स्वर्गको अप्सरा मानिने रारा तालको छेउमा
नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन
Ramesh UpadhayayMarch 19, 2022विषयगत
सत्तरीको दशकदेखि प्रशासन सुधारलाई संरचनात्मक सुधारको साँघुरो दृष्टिबाट मात्र नहेरी समग्र सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर्संरचना र राज्यलाई सक्षम व्यवस्थापकका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले स्थान पायो । नब्बेको दशकमा आइपुग्दा प्रशासनको वैयक्तिक क्षमता, विकास प्रशासन, कार्यविधि सरलीकरणजस्ता पक्षलाई एकाङ्की रूपमा नहेरी ‘प्रशासन होइन, व्यवस्थापन’ भन्ने व्यवस्थापकीय संस्कार राज्य प्रणालीभित्र प्रवेश गराउने काम भयो ।
प्रशासनलाई व्यवस्थापनमा परिणत गर्नु भनेको आफैँमा क्रान्तिकारी सोच थियो । प्रशासन लोते, भद्दा, भीमकाय तर कम उत्पादकत्व दिने, अन्तरनिहित कमजोरी भएको, ब्युरोप्याथोलोजीबाट ग्रसित र घुमाउरो जवाफदेहितामा रहेकाले प्रशासनका सेवाग्राही उसबाट सन्तुष्ट थिएनन् । यता नीति निर्माताहरू पनि प्रशासनिक कार्यशैलीको विकल्पको पक्षमा थिए । विकल्पलाई साथ दिन त्यस दशकमा नयाँ दक्षिणपन्थी विचारधारा, अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त, सार्वजनिक छनोटका सिद्धान्तजस्ता वैचारिक अवधारणाले पनि मद्दत पु¥याए भने विश्वव्यापीकरणले मुलुकहरूबीचका प्रशासनिक एवं शासकीय मान्यतालाई पनि पुनर्बोधले व्यावहारिक दबाब पार्दै ल्याएको थियो ।
सेवाग्राहीलाई विकल्प र चयनको अवसर दिनुपर्ने, कार्यकुशल सेवा माग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सामाजिक पृष्ठपोषण र त्यसप्रति शीघ्र प्रतिक्रिया दिनुपर्ने र जसका लागि संस्था खडा भएकोे छ, उनीहरूप्रति नै ती संस्था प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने मान्यताले बल पाएकाले सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि व्यवस्थापनवादको सिद्धान्तलाई सीमित रूपमा उपयोग गर्न थालियो । क्रिस्टोफर हुड तथा पोलिटजस्ता प्रशासनविद्ले यस वैचारिक अवधारणालाई विस्तृत रूप दिए । वैचारिक रूपबाट मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा हेर्दा पनि असीको दशकमा आइपुग्दा राज्यमाथि थुप्रै दबाब पर्न थाल्यो । ती दबाबका स्वरूपहरू प्रमुखतः थोरै साधनबाट धेरै उपलब्धिको माग, छिटोछरितो सेवा पाउने नागरिक दबाब, आफ्ना मतदाताप्रति छिटो सेवा दिने राजनीतिक दबाब र विश्वव्यापीकरणको दबाब थिए । फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रमा अपनाइएको व्यवस्थापनवादलाई अपनाउने आधार बन्यो ।
यसर्थ नब्बेको दशकमा आइनपुग्दै निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनबीच कतिपय कुरामा समानता आइसकेको थियो । निजी क्षेत्रका उत्कृष्ट व्यवहारलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रत्यार्पण गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा ‘व्यवस्थापन भनेको एकै हो, चाहे त्यो सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रमा नै किन नरहोस्’ भन्ने निष्कर्ष निकालियोे । त्यसैले प्रशासनिक अवधारणा मात्र बदलिएको होइन कि भाषा, शैली, वृत्ति व्यवस्था तथा कार्यसम्पादन सूचकबीच पनि समानता देखियो ।
प्रमुखतः निजी क्षेत्रका उत्कृष्ट शैली तथा पद्धतिलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश गराई प्रशासनलाई जनमुखी, नतिजामुखी तथा मूल्यबोधी बनाउने प्रक्रियाको नाम नै नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन हो । यसका (क) नतिजातर्फको अभिमुखीकरण, (ख) सानो, छरितो र कार्यमूलक सङ्गठन संरचना, (ग) बजार अभिमुखीकरण, (घ) व्यवस्थापन लचकता र (ङ) प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वजस्ता विशेष गुण रहेका छन्, जसले मितव्ययी, कार्यकुशल र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा पाउने नागरिक हक संरक्षित गर्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ ।
यी सबै कुरा सार्वजनिक क्षेत्रमा रहनु भनेको सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि बजारका सिद्धान्त र शैली (मार्केट डायनामिक्स) अपनाउनु हो ।
नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको आदर्श प्रयोगकर्ता मुलुकहरूमा सङ्गठन संरचनालाई एजेन्सीकरण गरी निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यस्वायत्तता दिने गरिन्छ । यो कार्यसम्पादन करारको माथिल्लो स्वरूप हो । यसभित्र वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यवस्थापनलाई नै स्वायत्तता दिने, कार्यसम्पादन परिसूचकको स्थापना गर्ने र सम्पादित कामका आधारमा व्यक्ति तथा निकायको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । साथै जनतासँग प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व निर्वाहका लागि उत्तरदायित्वका रेखाहरू अधोमुखी मात्र होइन, उध्र्वमुखी र समतलीय रूपमा पनि निश्चित गरिन्छ र व्यवस्थापनलाई नतिजा एवं मूल्यप्रति प्रत्यक्ष केन्द्रित गरिन्छ । यसले सिक्दै र गर्दै जाने पद्धतिका आधारमा गल्ती कमजोरीको निराकरण हुन गई सेवाग्राहीको चाहनालाई अनुभूत तहमा नै पूरा गर्न सकिने मान्यता राख्छ ।
अहिले के नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन सार्वजनिक क्षेत्रमा पूरै रूपमा लागू गर्न सकिन्छ वा यो नै सबै खाले व्यवस्थापन प्रश्नको एउटै रामवाण उत्तर हो भन्ने विवादसहितको बहस चल्ने गरेको छ । यसका कतिपय पक्ष र प्रवृत्ति राम्रो देखिएको अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, बेलायतको अनुभवबाट प्रमाणित भएको छ भने त्यहीँको अनुभवका आधारमा केही चुनौती पनि देखिएका छन् । जस्तो कि, सार्वजनिक सेवा मूल्यसम्बोधी हुन्छ । त्यसैले ‘हस्पिटलको सेवा होटलको जस्तो’ देखिन्छ ।
अर्को शब्दमा नागरिक कल्याण र सामाजिक न्यायभन्दा आर्थिक दक्षतामा ध्यान दिइन्छ । दोस्रो, सबै नागरिक ग्राहक हुँदैनन्, सबै क्षेत्रमा नागरिकलाई ग्राहकको व्यवहार गर्न पनि हुँदैन । तेस्रो, मूल्य तिर्न नसक्नेका लागि नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले केही गर्दैन । त्यसैले आर्थिक बजारमा सफल भएका कुरा राजनीतिक बजारमा त्यै रूपमा लागू गर्न सकिँदैन । चौथो, यसले राजनीतिक जवाफदेहितालाई बजार वा करारमा समर्पण गराउँछ । पाँचाँै, सार्वजनिक क्षेत्रका सेवाहरू व्यापारिक रूपमा मापन गर्न पनि सकिँदैन । सकिए पनि निकै कठिन हुन्छ ।
छैटौँ, यसले राज्यलाई करारी निकायमा पु¥याउँदाको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा कस्तो असर पर्छ, सोको मूल्याङ्कन नगरिकनै त्यत्तिकै समर्थन वा विरोध गर्न उचित हुँदैन । सातौँ, सबै कार्यको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संस्था भनेको राज्य हो । राज्यको क्षमता, संस्थात्मक सम्झना, राजस्वजस्ता पक्षमा यसले पार्ने प्रभाव पनि दीर्घकालीन रूपमा अनुकूल देखिँदैन । साथै व्यवस्थापन सुधार सामाजिक परिवेशसँग मेल नखाने भए यसले विकृति पनि ल्याउँछ । त्यसैले सबैखाले समाजमा एकै प्रकारको व्यवस्थापन ढाँचा÷शैली कार्यमूलक पनि हुँदैन । जस्तो कि, न्युजिल्यान्डमा सफलता पाएको कार्यसम्पादन तलब जर्मनीमा त्यै रूपमा सफल भएन ।
नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन राज्य वा यसको वैधानिकताको विकल्पमा आएको पटक्कै होइन, जुन यदाकदा सोचिएको देखिन्छ । यो राज्य प्रणालीलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाई मौद्रिक मूल्य सार्थकताको पुष्टि गर्ने संयन्त्र मात्र हो । त्यसैले यसको त्यत्तिकै समर्थन वा अन्धविरोध गरिनु नै अव्यावहारिक हुन आउँछ । यसलाई हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना र आवश्यकताका आधारमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ । पोलिट तथा हुडले पनि यसलाई यही रूपमा लिएका छन् ।
यसर्थ हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई कार्य प्रणालीको निक्षेपण गरी सेवा लागत घटाउने सन्दर्भमा फिल्डस्तरका कार्यालय (गाउँपालिका, नगरपालिकाजस्ता स्थानीय तह र विषयगत मन्त्रालयका स्थानीय संरचनामा)मा छानिएका सेवा वितरण निकायलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरी थप स्वायत्तता दिनुपर्ने क्षेत्रमा (सरकारी संस्थान, विकास बोर्ड र सेवा उत्पादक सरकारी निकायमा), हुलाक सेवाजस्तो सार्वजनिक सेवालाई जनस्तरमा पु¥याउन संस्थानीकरण गर्ने सन्दर्भमा, कार्यसम्पादन तलब र प्रोत्साहनका लागि, कार्यसम्पादन सूचक स्थापना गरी अन्तरनिकाय कार्य प्रतिस्पर्धा गर्न, सङ्गठनमा नयाँ सोच, कार्यशैली र व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्न र कार्यसम्पादन करार गर्नका लागि अपनाउन सकिन्छ ।
नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यशैलीलाई प्रतिस्पर्धात्मक, कार्यमूलक, जवाफदेही एवं लागतप्रभावी पारी उद्देश्यमूलक बनाउन जोड दिन्छ । यो राज्य पुनर्बोधको संयत्र पनि हो तर यसलाई बिनातयारी सबै क्षेत्रमा लागू गरिएमा सङ्क्रमणमा देखिने समस्याका कारणले भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । विगतको हाम्रो यस सन्दर्भको सीमित प्रयोगले पनि त्यसै भन्छ । त्यसैले आन्तरिक क्षमताको विकास गरी कार्यसंस्कृति निर्माण गर्ने साधनका रूपमा छानिएको क्षेत्रमा मात्र यसलाई लागू गर्नु हाम्रा सन्दर्भमा श्रेयष्कर हुन्छ । प्रायः कार्यसञ्चालन तहमा यसलाई लागू गर्न सकिन्छ तर केन्द्रको नियमन र कार्यसम्पादन अनुगमन क्षमता सुदृढ नपारी यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
नब्बेको दशकबाट सरकारको पुनर्बोधको सिद्धान्तले नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई परिस्करण गरेको छ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा सरकारको पुनर्बोधको अवधारणा थियो तर त्यो मात्र पूर्ण थिएन । बजारवाद मात्र सरकारको पुनर्बोध होइन, त्यसैले यसभन्दा माथि रहेर हेरिनुपर्ने धारणा डेभिड ओब्सर्न, पिटर प्लास्त्रिक, क्रिष्टोफर हुड, अल अलगोरजस्ता विद्वान्हरूले गरे, जुन वास्तविक रूपमा सरकारको पुनर्बोध थियो । अहिले पनि सेवा लागतको न्यूनीकरण, छरितो र कार्यमूलक सङ्गठन, सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको सम्बन्ध विकासमा नै सार्वजनिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सुधारका नयाँ–नयाँ अवधारणा विकास हुँदै आएका छन् । यस क्रमलाई नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले महìवपूर्ण पृष्ठाधार दिएको छ ।
स्रोत : गोरखापत्र
लेखक : गोपिनाथ मैनाली
Ramesh UpadhayayMarch 19, 2022
प्रशासन शब्द सार्वजनिक सेवामा र व्यवस्थापन शब्द निजी क्षेत्रमा प्रचलित थियो । प्रशासनको तुलनात्मक अध्ययनपछि यसमा व्यापक सुधारको खाँचो देखियो । यही खाँचो पूरा गर्न प्रशासनमा निजी क्षेत्रका राम्रा गुणहरू अंगीकार गरी यसलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्न सुरु गरियो । अर्थात् परम्परागत र एकसूत्रीय प्रशासन व्यवस्थामा निजी क्षेत्रका राम्रा गुण अंगीकार गरिएपछि यो सार्वजनिक व्यवस्थापनका नामबाट परिचित भयो । यही परिवर्तनस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रमा निजीकरण, सेवा करार, कार्यसम्पादन सम्झौता, गुणस्तर परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण, सेवाग्राहीका गुनासा सुनुवाइजस्ता विषयले प्रवेश पाए ।
सार्वजनिक व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यक्षेत्र
(क) योजना व्यवस्थापन : मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्ने, जनसहभागिता बढाउने र त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने कार्य सार्वजनिक व्यवस्थापनले गर्दछ । जनताको मागअनुसारको नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गरी जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ । जसका लागि आवश्यकताका आधारमा नीति तर्जुमा र जनताको मागका आधारमा योजना तर्जुमा, छनोट र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
(ख) जनशक्ति व्यवस्थापन : सार्वजनिक व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने एक मात्र जीवन्त र चलायमान आधार मानव स्रोत हो । प्रभावकारी नीति तर्जुमादेखि योजनाको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक क्षेत्रमा दक्ष, योग्य, सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ । योग्य, दक्ष, प्रतिस्पर्धी जनशक्तिले मात्र समग्र व्यवस्थापनमा योगदान गर्न सक्ने भएकाले योग्यतम् जनशक्तिको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार गर्ने कार्य सार्वजनिक प्रशासनका लागि अपरिहार्य रहन्छ ।
(ग) विकास व्यवस्थापन ः नागरिकको राज्यप्रतिको विकासको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने कार्य सार्वजनिक व्यवस्थापनले गर्दछ । सरकारका कार्यहरूमध्ये विकास प्रमुख एवं आधारभूत कार्य हो । विकासको पहिचान, सञ्चालन, उपभोग र रेखदेखको कार्यमा समेत सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रत्यक्ष सहभागी रहनुपर्दछ ।
(घ) संगठन व्यवस्थापन ः सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संगठनको ठूलो भूमिका रहन्छ । छरितो, विकेन्द्रीकृत, आधुनिक प्रविधियुक्त संगठनले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्तछ । केन्द्रीकृत, अधिक पदसोपानयुक्त, अधिकारनियन्त्रित संगठनले उचित प्रतिफल नदिएकाले नै सार्वजनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले उपयुक्त संगठन संरचनामा जोड दिएको हो ।
(ङ) सेवाको व्यवस्थापन : राज्यको उत्पति नै नागरिकको सेवाका लागि भएको हो । यस्ता सेवा सुविधा मितव्ययी, छिटो–छरितो एवं प्रभावकारी हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रसमेतका राम्रा गुणहरू अवलम्बन गरी सेवाग्राहीलाई सेवाका लागि सँगसँगै लानुपर्दछ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले सेवाको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमा जोड दिन्छ ।
(च) बजेट व्यवस्थापन : बजेटको सुनिश्चितताविना सेवा प्रवाह वा विकास निर्माण कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । सार्वजनिक व्यवस्थापनले बजेटको समेत व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । स्रोतको पहिचान, प्राप्ति, उपयोग, लेखांकन र लेखापरीक्षणसम्मका कार्य बजेट वा वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्दछन् ।
सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र व्यापक र गतिशील हुनैपर्दछ । न्यूनतम स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी अत्युतम नतिजा हासिल गराउनु व्यवस्थापनको कौशल हो । पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा आएका नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक सेवा र नयाँ सार्वजनिक प्रशासनका राम्रा पक्षहरूको अवलम्बन गर्दै कुशल व्यवस्थापनका माध्यमबाट साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरी जनहित कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो।
Ramesh UpadhayaySeptember 18, 2021ऐन/कानून
फ्लाइट नम्बर ४०४
Ramesh UpadhayayAugust 30, 2020कथा
घट्टेकुलोका साँघुरा गल्लीहरुमा हिड्दा हिड्दै सोच्छु। आरक्षण भन्ने जिनिस नहुँदो हो त के हुन्थ्यो! एकछिन गम खान्छु। अनि आफैलाई उत्तर दिन्छु, ‘ब्याट नम्बर ३२ को अधिकृत हुन्थेँ।’
अफसोच् त्यसो भएन। पुछार तिर वैकल्पिक परेँ। मेरो अधिकृत हुने कोटा काठमाडौँको आलिसान बंगलामा हुर्केकाहरुले हडपे। हो, मलाई यस्तै लाग्छ। बेला-बेला दाह्रा किट्छु। फेरि एकछिनमा आफै शान्त हुन्छु। स्याङ्जाका बाँदर लड्ने भीरमा खनी खोस्री हुर्काएर सरकारी जागिरे बनाउने बा-आमाको सपना अधुरै रहने भयो। साँझपख चुरोटको धुँवासँगै निरासाको भाव प्रकट गर्छु।
यसरी आफैसँग मुर्मुरिदै बस्न थालेको २ वर्षपछि बैकल्पिकबाट अधिकृत छैठौं सिफरिस भएको खबर पाएँ। खबर सुन्न साथ पूरै घट्टेकुलो फन्का मारेँ। अनामनगरको लोकसेवा कार्यालय गएँ। संघतिरका सुब्बासापले नियुक्ति नलिएर मेरो कल्याण गरिदिए छन्। उनका लागि त्यो जागिर केही थिएन होला। तर मलाई भने सारा संसार थियो।
गाउँमा बाआमालाई छोरो अझै जागिर लागेन भनेर छिमेकीले मुटु छेड्ने वचन लगाउँथे। त्यही वचन परास्त गर्ने सुदर्शन चक्र थियो। जे होस् त्यो जागिर सबथोक थियो।
बबरमहल अफिसको चौथोँ तलाबाट सिंहदरबारको दक्षिणी भागतर्फ हेर्दे टोलाइरहेको थिएँ। फोनको घन्टी बज्यो, तेस्रो घन्टीपछि पकेटबाट फोन झिकेर हेरेँ। सेभ नभएको नम्बर रहेछ।
एकदमै नजिकका यारीदोस्तीहरुको नम्बर सेभ नगर्ने मेरो पुरानै बानी हो। कतै कुनै चिनेजानेकै साथी हो कि मैले सम्झने प्रयास गरेँ, अहँ! सम्झन सकिन।
हेलो भनेर फोन उठाए। उताबाट आवाज आएन । फेरि हेलो भनेँ, अहँ फेरि पनि आवाज आएन। तेस्रो पटकमा मलिन स्वरमा आवाज आयो, 'क्षितिज चिन्यौ?'
मैले आवाज ठम्याउने प्रयास गरेँ। एकछिन गमेर स्वर चिन्ने कोशिस गरेँ। त्यसपछि मलाई आफ्नो पुरानै अन्दाजमा भन्न मन लागेको थियो। कसरी बिर्सनु सक्छु यो आवाजलाई तर भनिनँ। यत्ति भने 'चिने नि अपराजिता।'
हो, त्यो आवाज अपराजिताको थियो। जो केही वर्ष पहिलेसम्म हरेक निष्पट्ट रातका प्रहरमा मेरो मोबाइल फोनमा गुन्जिरह्यो। दिनहरुमा चाहिँ क्याफेहरु तिर।
'कहा छौँ, अफिस?' उसले सोधी।
Ramesh UpadhayayAugust 28, 2020कथा
गाउँको रने स्कुलमा राजेश भनेर चिनिन्थ्यो। सरहरुले राजेश तिरुवा भन्थे। लामो कपाललाई टाउकोको बीचबाट दायाँबायाँ पारेर चिटिक्कसँग मिलाएको थियो, उसले।
पहाडबाट तराइ झरेपछि मैले पहिलोपल्ट त्यस्तो कपाल देखेको थिएँ। कति विद्यार्थीहरुले पछाडिको तिरुवा थर हटाएर हमाल जोड्थे। अनि भन्थे, ‘के छ राजेश हमाल?’
उ नाम सुनेर मुसुक्क हास्थ्यो। टाउको मात्र हल्लाउथ्यो र नबोली जान्थ्यो। ‘लामो कपाल छ भन्दैमा आफूलाई राजेश हमाल नै ठान्छ,’ उ गैसकेपछि एउटा बोल्यो।
‘थोपडा हेरन, थोपडा,’ अर्कोले थप्यो।
‘गरिबोका राजेश हमाल।’
‘फिल्मै खेलिहाल्यो भने राजेश हमाल त त्यस्तै हो, राजेन्द्र खड्गीको वाला रोल पाउँला कि।’
‘कहाँ विदेशबाट डिग्री पास राजेश हमाल, कहाँ ८ कक्षामा २ पल्ट फेल रने।’
स्कुल पछाडिको अग्लो ढिस्कोमा बसेर अधिकांशले यसरी नै गिल्ला गर्थे उसको। रनेलाई पिठ्यु पछाडि गरिने यस्ता खिसीसँग कुनै मतलब थिएन।
रने तिरुवालाई राजेश हमाल किन भन्छन्? मैले भेउ पाउन सकेको थिइनँ। स्कुलबाट फर्कदा गोबिन्दले भनेको थियो, ‘राजेश हमाल भनेको फिलिमको हिरो क्या।’ खत्रा हिरो। हिरो को पनि हिरो। महानायक। उसले यसरी विभिन्न उपमा दिएर राजेश हमाललाई चिनाएको थियो।
हरिया डाँडाकाँडा र घुमाउरो कर्णाली नदी। अग्लो थुम्कोबाट हेरुरहँ लाग्ने बिहानको सूर्योदय। उत्तरतिरका सेताम्मे हिमाल। हिउँदमा विमानस्थलको रनवे नै ढाकिने गरि पर्ने कमल बजारको हिउँ।
पहाडको यस्तै मनोरम प्रकृतिसँग रमाएर हुर्केको थिएँ म। उजाड र फुस्रो खरले छाएका वस्ती। आर्सेनिक मिसिएको ह्वास्स गन्ध आउने नलको पानी। पहिरोले उजाड हुँदै गएको चुरे। उखरमाउलो गर्मी।
हो, तराई यस्तै थियो। ठ्याक्कै, मेरो घर पर त्यो गल्लीको एउटा चोकमा छ, यहाँ के छैन सबथोक छ भन्ने भूपीको कविताको अंश जस्तै लाग्थ्यो। तर, यी सबै कुरालाई बिर्साउने एउटा अचम्मको प्रविधि थियो, तराईमा। टेलिभिजन र त्यसमा देखाइने फिल्म।
घट्टेकुलोका साँघुरा गल्लीहरुमा हिड्दा हिड्दै सोच्छु। आरक्षण भन्ने जिनिस नहुँदो हो त के हुन्थ्यो! एकछिन गम खान्छु। अनि आफैलाई उत्तर दिन्छु,...
‘सामाजिक संजाल’ र ‘भाइरल’ शब्द पर्याबाची जस्तै भएर आएका छन्। संजालले दिनानुदिन नयाँ-नयाँ विषयवस्तु र घटना खोज्छ जो सजिलै भाइरल होस्। जुन घ...
आर्यघाटमा एउटा शव जल्नै आँटेको छ। उ शव जलाउन तम्तयार चितातर्फ एकनासले हेरिरहेको छ। लास पोल्ने मानिस बाहेक त्यो चिताको वरिपरि कोही देखिदैंन...
गाउँको रने स्कुलमा राजेश भनेर चिनिन्थ्यो। सरहरुले राजेश तिरुवा भन्थे। लामो कपाललाई टाउकोको बीचबाट दायाँबायाँ पारेर चिटिक्कसँग मिलाएको थियो...
बबरमहल अफिसको चौथोँ तलाबाट सिंहदरबारको दक्षिणी भागतर्फ हेर्दे टोलाइरहेको थिएँ। फोनको घन्टी बज्यो, तेस्रो घन्टीपछि पकेटबाट फोन झिकेर हेरेँ।...
प्रशासन शब्द सार्वजनिक सेवामा र व्यवस्थापन शब्द निजी क्षेत्रमा प्रचलित थियो । प्रशासनको तुलनात्मक अध्ययनपछि यसमा व्यापक सुधारको खाँचो देखि...
सत्तरीको दशकदेखि प्रशासन सुधारलाई संरचनात्मक सुधारको साँघुरो दृष्टिबाट मात्र नहेरी समग्र सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर्संरचना र राज्यलाई सक्षम व्...
Copyright © Ramesh Upadhayay | Design By SHANKAR ARYAL
Website by SHANKAR ARYAL | Design by SHANKAR ARYAL | WEBSITE Arjels Diary - Shankar Aryal